Filtrer les éléments par date : jeudi, 28 octobre 2021
jeudi, 28 octobre 2021 19:59
Lasa aiza ny haba sy hetra alaina amin'ny solika
Nahaton'ny ministeran'ny asa vaventy ny fanaovana tolobidy amin'ny famatsiam-bola azo avy amin'ny haba sy hetra avy amin'ny solika, na ny Fonds routier.
Natsahatra daholo avokoa ny asa efa mandeha, ka ananganana komity andrefy sy andanja ny asa vita.
Ireo haba sy hetra :
- Lasantsy 1506ar (37%) amin'ny vidiny amarotana azy 4100ar
- Solika fandrehatra 20ar (1%) amin'ny vidiny amarotana azy 2130ar
- Gazoala 956ar amin'ny vidiny amarotana azy 3400ar
Isaky ny mividy solika 1l ianao izany dia tsarovy fa manome eo no ho eo 1061ar (30%) anamboaran-dalana.
jeudi, 28 octobre 2021 15:30
Andranomanelatra : Tratry ny aretim-pivalanana ireo ombivavy beronono
Misy aretina hafahafa mahazo ireo ombivavy beronono, karazany pie rouge norveziana ompian'ny tantsaha aty Andranomanelatra Antsirabe II.
Mivalana mpiriritra, miakatra hafanana, zara fa manome ronono. Ireo no fisehony hoy ny mpiompy.
Misy efa hatramin'ny 1987 no niompy ombivavy beronono, fa izao vao sendra izao aretina izao ny ombiny, ka anaovan'izy ireo antso avo amin'ny ministeran'ny fiompiana hijery akaiky sy hijery vahaolana sao handripaka ny omby izao tranga izao.
Efa idiram-patiantoka rahateo ny mpiompy ankehitriny.
jeudi, 28 octobre 2021 13:41
Famerenana ny fandriampahalemana : Nitsidika ireo faritra mena ao Amoron’i Mania sy Menabe ny iraky ny governemanta
Nidina ifotony tany amin’ireo Kaominina isany anjakan’ny tsy fandriampahalemana noho ny asan-dahalo ny iraka notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta Ntsay Christian, nahitana ireo minisitra misahana ny fandriampahalemana ambanivolo, dia ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ny jeneraly Gelle Serge.
Teo koa ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, Ramatoa Razanamahasoa Christine, solombavambahoaka voafidy tany Ambatofinandrahana, faritra Amoron'i Mania, niaraka tamin'ny Atoa Imbiky Herilaza, Mpitahiry ny tombokasem-panjakana sady minisitry ny Fitsarana, ary ny minisitry ny mponina.
Nalehan’ny delegasiona tao Mangataboahangy, Kaominina ambanivohitra ao anatin’ny Distrikan’Ambatofinandrahana. Niazo ny vavahadin'ny Faritra Menabe, Kaominina ambonivohitra Miandrivazo. Nito-didoha tany amin'ny kaominina Betsipolitra, Distrika Miandrivazo, ary koa tao Mahabo, Faritra Menabe ho fametrahana sy famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
jeudi, 28 octobre 2021 13:25
jeudi, 28 octobre 2021 13:15
Siramamy Bio : Mahavokatra 200 taonina isan-taona ny orinasa ao Fanandrana – Toamasina II
Mamokatra siramamy bio hatrany amin’ny 200 taonina isan-taona ny orinasa tantanan'ny Kôperativa PAACO ao Fanandrana – Toamasina II, Faritra Atsinanana.
Ny Frantsay no manjifa ity vokatra malagasy izay reharehan'ny Faritra Atsinanana ity.
Tantsaha mpamboly manododina ny 150 no mpikambana amin'ity kôperativa ity, ka ny AVSF sy ny ETHIQUABLE no mpanao tantsoroka.
Notokanana ny alarobia 27 oktobra 2021 ny orinasa fanodinana siramamy Bio ity, ka tonga nitarika ny lanonana taty an-toerana ny Goverinora Faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore.
Tafiditra ao anatin'ilay fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny Faritra Atsinanana sy ny Faritra Normandie Frantsa amin'ny alàlan'ilay tetik'asa AGRICOOP izao tetik'asa izao.
jeudi, 28 octobre 2021 13:01
Antsohihy : Misokatra androany ny « Journées Internationale des Régions » andiany fahatelo
Ny Faritra Sofia, tarihan'ny Governora Lylison René de Rolland, no manatanteraka ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Faritra na ny JIR (Journées Internationale des Régions).
Andiany fahatelo ity, taorian’Analamanga sy Itasy, ampahafantarana ny otrikaren’ny faritra amin’izao tontolo izao, hisintomana mpampiasa vola ary koa hitadiavana lalam-barotra sy mpiara-miombon’antoka amin’ireo mpandraharaha ao an-toerana.
Tonga nanokatra izany aty Antsohihy androany ny Praiminisitra Ntsay Christian sy mpikambana vitsivitsy ao anatin’ny governemanta, notronin'i Governora Faritra Sofia Lylison René de Rolland, sy ireo olom-boafidy eto anivon'ny Faritra Sofia.
Misy masoivoho vahiny vitsivitsy ihany koa tonga aty an-toerana, ankoatra ireo mpandraharaha sy ireo mpampiranty vokatra.
Tsy hifarana raha tsy ny sabotsy 30 oktobra izao ny hetsika.
jeudi, 28 octobre 2021 12:57
RN13 : Harenina ny ampahany mirefy 118 km eo anelanelan’ny Ikalamainty RN7 sy ny fivoahana eo Betroka
Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 27 oktobra 2021 ny tetikasa fanarenana ny lalam-pirenena faha 13 na RN13, ampahany eo anelanelan’ny sampanan-dalana RN7 Ikalamainty sy ny fivoahana eo Betroka izay mirefy 118 km.
Ankoatra izay, ny fanarenana ity lalam-pirenena ity dia hiteraka fitomboan’ny fampiasana ny seranan-tsambon’i Ehoala ao Fort Dauphin mandritry ny taona maro.
Mizara telo ny tetikasa:
Morondava : Nesorina ny Préfet
Natsahatra tamin’ny asany ny Préfet-n’i Morondava, araka ny fanapahana noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 27 oktobra 2021. Tsy mbola misy ny fanendrena izay ho solony.